Madaxtooyada Soomaaliya oo ku fidaysay degmooyin horleh - Awdinle Online
Madaxtooyada Soomaaliya oo ku fidaysay degmooyin horleh
Madaxtooyada Soomaaliya waxa ay dhul ahaan ku tallaa degmada Warta-nabadda ee gobalka Banaadir, waxaasa sanadahan ay noqotay Jaziirad fideysa, waxa ayna gashay degmoyin badan oo gobalka Banaadir ah.
Degmooyinka ay madaxtooyadu ku fiday waxaa ka mid ah Boondheere, Waabere iyo Xamar-weyne, waxaana dadka ku nool xaafadahaas ay madaxtooyadu gaartay dhibanayaal u noqdeen ciidanka ilaalada Villa Somalia.
Muda sanad ah waxaa wax lala qabsaday aheyd in gaadiidka dadweynaha iyo baabuurta ay wataan shacabku ka caganadaan wadooyinka hormara Madaxtooyada, waxaase hada arinta cusub ah, in xataa dadkii xaafadahaas deganaa loo diido inay lug ku maraan wadada taas oo ah dhib aanay la qabin dadka magaalada inteeda kale degan.
Madaxtooyadu waxa ay mudooyinkan soo kordhisay ciidamo cusub oo ilaalo looga dhigay, kuwaas oo aan horay u joogi jirin, waxaana sidoo kale la kordhiyay biraha yaalla afaafka laga galo ee Controllada.
Cadaadiska la saara dadka waxaa ka dhalan kara dhibaatoyin waa-weyn, taas oo sababi karta in dadka cara badan ay u qaadaan dowladda iyo ciidankii loogu talagalay difaacooda.
Dad badan ayaa xasuustaan balanqadkii Madaxweyne Farmaajo ee ahaa in dowladiisu aysan shacabka wadooyinka ka xiran doonin, oo hadii ay Shabaab ka adkaan waayaan gadiidka gaashaaman uu gadaal ka gelayo.
Previous articleKoonfur Afrika : Dil loo geystey Muwaadin Soomaaliyeed
Next articleDegmada Qansax Dheere oo Qarax lagula eegtay ciidamo ka tirsan Itoobiya